၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
စစ်တပ်မှ ​အရပ်သားအစိုးရ၏အာဏာအားအဓ္ဓမနည်းဖြင့်ကြံစည် သိမ်းပိုက်ရယူခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မနက်ပိုင်းအချိန်တွင် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် အခြားသောပါတီဝင်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေသည် နိုင်ငံ‌တော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့ပြီး တပ်မ‌တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းယူမှု ဖြစ်ပွားပြီး မကြာမီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေါ်ကီတော်ကီပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဦးဝင်းမြင့်ကို ကိုဗစ်ကာလ၌ ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်း‌ကြောင့်ဟု စွပ်စွဲ၍ လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့်ဟု စွပ်စွဲကာ ထပ်မံတရားစွဲခဲ့ပြန်သည်။၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ထိ စစ်အစိုးရအားဆန့်ကျင်သူများအား အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၂၀ ကျော်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူ၆၈၀၀ကျော်ရှိသည်ဟု AAPPနှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများတွင်တွေ့ရသော်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှာငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သည်။
(2021 Myanmar coup d'état)
ဖမ်းဆီးခံရသော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဝဲ) နှင့်
အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သောခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် (ယာ)
NLD အစိုးရ ဖျက်ချခံရ၊ စစ်အစိုးရ စတင်
ဝန်ကြီး ၂၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
လွှတ်တော်ဖျက်သိမ်း၊ ရွေးကောက်ထားသည့်အစိုးရသစ် မဖွဲ့စည်းနိုင်
ဦးမြင့်ဆွေကို ယာယီသမ္မတ အဖြစ်ထားရှိ
စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်
၂.၁ နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ထိန်းသိမ်းခြင်း
၂.၂ အရေးပေါ်အခြေအနေ သက်တမ်းတိုးခြင်း
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိထားပုံ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်လွှတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တိုင်းပြည်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ နှင့် ၁၉၆၀ အကြားတွင် တပ်မတော်သည် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအစား တိုင်းပြည်ကို‌ခေတ္တအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် အာဏာသိမ်းပိုက်ပိုက်ခဲ့‌သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အရေးအခင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရာ ဦးနေဝင်းအစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် တပ်မတော်ဦးစီးသော နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ သည် ချက်ချင်းအာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရွှေးကောက်ပွဲကို ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ရာ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အနိုင်ရခဲ့လေသည်။ သို့သော်တပ်မတော်သည် ထိုရလဒ်များကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်။
စစ်တပ်အစိုးရသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း အရပ်သားအစိုးရ၏ပါတီမှာ စစ်တပ်ကသာဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်ထပ်မံ၍ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် လွှတ်တော်၏ နေရာများအနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုတပ်မတော်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နေရာယူထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် လွှတ်တော်နေရာ ၄၇၆ နေရာအနက် ၃၉၆ နေရာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ထက်ပင် ပို၍များပြားသည်။ တပ်မတော်၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမူ နေရာ ၃၃ နေရာသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါတပ်မတော်သည် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ဦးရေးထက် မဲစာရင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် ၁၀ သန်းကျော်ပိုမိုများပြားနေခြင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးချိန်များတွင်လဲ မလျှော်ကန်သော (ဥပဒေနှင့် မညီညွှတ်သော) မဲပေးခြင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ရသော ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းများမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို အမှန်မဟုတ်ကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့သည် အာဏာသိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁ရက်​နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် အခြားသောပါတီခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ပြောရေး‌ဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဆိုသည်။ မိမိကိုလည်း တပ်မတော်မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးနိုင်ချေ ရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အင်တာနက်လိုင်းနှင့်ဖုန်းလိုင်းများမှာလည်း ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားလေသည်။
ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ အယောက် ၄၀၀ ခန့်ကို နေပြည်တော်ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ၌ အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်။ ထိုအခါ NLD သည် ထိုဖမ်းဆီးခံရသောသူတို့အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့အထိ နေထိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူများသည် ထိုကိုယ်စားလှယ်များကိုရိပ်သာအတွင်း၌သာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်ရန် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာတပ်မတော်သည် ထိုကိုယ်စားလှယ်များအား ၂၄ နာရီအတွင်း စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမှ ထွက်ခွာရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် NLD လွှတ်တော်အမတ်အယောက် ၇၀ တို့သည် စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် လွတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်သကဲ့သို့ သစ္စာဆိုကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော်သည် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသော မြဝ‌တီမင်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်နှင့် ရွှေညဝါဆရာတော်တို့အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ရှစ်လေးလုံးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ ကိုမြအေးအားလည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (Assistance Association for Political Prisoners) အဖွဲ့၏အဆိုအရ လွှတ်တော်အမတ် ၁၃၃ ဦးနှင့် ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအတွက်တက်ကြွသူ ၁၄ ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးထားသည်။
မြန်မာစစ်တပ်မှ သံချပ်ကာကားလှည့်လည်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်
နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့များတွင် တပ်မတော်စစ်သားများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နံနက် ၁၀နာရီခန့်မှစ၍ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှစစ်တပ်သည်တိုင်းပြည်ကို စတင်အုပ်ချုပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတဦးမြင့်ဆွေသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုမရှိသော်လည်း ယာယီသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁ ရက် ၂ လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁၁) ပုဒ်မ ၄၁၇အရ နိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပြီး ပုဒ်မ ၄၁၈ အရ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး‌မင်းအောင်လှိုင်အား အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီသည်တိုင်းပြည်ကို တစ်နှစ်မျှ အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်များဆောင်ရွက်ပြီး သည့်နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အား ပုဒ်မ ၄၂၂ အရ အာဏာ ပြန်လည်လွှဲအပ်ပြီးနောက် (၆) လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ညပိုင်းတွင် တပ်မတော်သည် ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးအသစ် ၁၁ ဦး ကို ခန့်အပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်စီးခဲ့ရာ ‌သူမအားနိုင်ငံခြားမှဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ (ICOM စကားပြောစက် ၁၀ လုံးနှင့် Jumber တစ်လုံး) ကို တရားမဝင်တင်သွင်းသည်ဟု တရားစွဲ၍ရမန်ယူခဲ့သည်။ ထိုအမှု၏ပြစ်ဒဏ်သည် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အပြင် ဒဏ်ကြေးပါပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Car Campaign တွင် လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ကို လူစုလူဝေးပြုလုပ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် ဥပဒေစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲ၍ရမန်ယူခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဩစတြေးလျန်းလူမျိုး စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်သူ ရှော(န်) တားနဲလ် (Sean Turnell) အားဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်တို့တွင် တပ်မတော်သည် ညအပြင်မထွက်ရနှင့် လူ ၅ ဦးနှင့်အထက် စည်းဝေးခြင်းမပြုရအမိန့်တို့ကို ကြေညာခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ NLD ရုံးချုပ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တပ်မတော်သည် ဆိုက်ဘာဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေမူကြမ်းကို နည်းပညာသမားများသည် လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သည်ဟုဆိုကာ အပြင်းအထန်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ မြန်မာ့အင်တာနက်အတွင်း firewall ကို တရုတ်မှကူညီ၍ တည်ဆောက်မည့်အကြောင်းကို သံသယဖြစ်လာခဲ့ကြသဖြင့် တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်တရုတ်သည် ထိုအကြောင်းကို ကောလဟာလဟူ၍ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ်၌ ရဲသားများသည်လည်း ဆန္ဒပြသူများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်၌ တပ်မတော်နှင့်မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့သည် အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဝန်ထမ်းများ၊ NLD အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆန္ဒပြသူများနှင့် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးရွှေမန်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရမှသတင်းမီဒီယာအား "အာဏာသိမ်းအစိုးရ" (အင်္ဂလိပ်အားဖြင့် "junta"၊ "regime") စသောအခေါ်အဝေါ်များကို အသုံးမပြုရန်တားမြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မင်းကိုနိုင်အားလည်း ဖေ့စဘွတ်ပေါ်တွင်ပို့စ်များရေးတင်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် ပြည်သူများအားဖိနှိပ်ရန် တင့်ကားများ၊ သံချပ်ကာကားများစသည်တို့ကို မြို့ကြီးများတစ်ခွင်ပို့ချထားသည်။ ပြည်သူများသည် ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလွှတ်ပေးရန် ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထပ်မံတရားစွဲရမန်ယူခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဆယ်လီဘရစ်တီ (နာမည်​​ကျော်) ၆ ဦးအား CDM ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂမြန်မာသံအမတ် ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် စစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကို ငြင်းဆန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်နေ့တွင် တပ်မ‌တော်မှသူ့အား ရာထူးနေရာမှ ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီ ကီတာဇူမီ (Yuki Kitazumi) အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၁ မတ်လ ၈ ရက်တွင် MRTV သည် မစ္ဈိမ၊ Myanmar Now၊ DVB၊7Day News နှင့် ခေတ်သစ်မီဒီယာ ဟူသောသတင်းမီဒီယာတို့ကို ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ယူကေသံအမတ် ကျော်စွာမင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တရားရုံး၌ ဦးဝင်းမြင့်၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့ နံနက် (၅)နာရီခန့်တွင် သမ္မတအိမ်တော်ရှိ အိပ်ခန်းသို့ စစ်သားများက တံခါးလာခေါက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်တော်အတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ထားသော စစ်သားများ ရောက်ရှိနှင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့နောက် စစ်သားများက အိမ်တော်အရှေ့ပိုင်းရှိ သမ္မတရုံးခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (သို့မဟုတ်) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးမှ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ၍ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သမ္မတမှ ငြင်းဆိုသဖြင့် အနောက်ပိုင်းရှိ အိမ်တော်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သမ္မတနှင့် မိသားစု၏ လက်ကိုင်ဖုန်းများကို သိမ်းဆည်းလိုက်ကြသည်။ ထိုနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သမ္မတအိမ်တော်မှ (၃)ရက်အတွင်း ဖယ်ရှားရန် ပြောခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၄)ရက်နေ့ညတွင် သမ္မတအိမ်တော်အနီးရှိ ဝန်ကြီးအိမ်တော်များမှ တစ်လုံးတွင် နေရာချပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ် မေလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ရာမှ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သဖြင့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့တွင် ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၏ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးပေါ်ကာလအား (၆)လ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်း အကြောင်းအရင်းကို သေချာစွာမသိရသေးပေ။ တပ်မတော်သည် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုသည် နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အာဏာမသိမ်းပိုက်မီ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် စစ်တပ်၏စွပ်စွဲမှုကို သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အာဏာသိမ်းပိုက်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ တပ်မတော်မှနိုင်ငံကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် အသက် ၆၅ နှစ် ပြည့်သောအခါတွင် ရာထူးမှအနားယူရမည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည် ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လတွင် အနားယူရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အားဆက်ခံမည့်သူသည် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကသာလျှင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာမင်းအောင်လှိုင်အနားယူသောအခါ နိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှသူ့အား ရိုဟင်ဂျာပြဿနာများနှင့် အခြားစစ်ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် တရားစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရာထူးမှအနားယူပြီးနောက်သူသည် နိုင်ငံရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဟုလည်း အရိပ်အမြွှက်ပြခဲ့သည်။
Justice For Myanmar အဖွဲ့သည် မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုတွင် စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များရှိ‌သောကြောင့် စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှု မဖြစ်စေရန် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ မင်းအောင်လှိုင်သည် စစ်တပ်ပိုင်ဖြစ်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်တို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။  သူ၏ သားသမီးများသည်လည်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
အာဏာမသိမ်းမီ ရက်အနည်းငယ်အကြာက International Monetary Fund သည် ကိုဗစ်‌ရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀ မီလီယံ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုရန်ပုံငွေကို ထိုအဖွဲ့မှပြန်ယူခြင်းမရှိဘဲ ပေးအပ်ထားသည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခံရသောအခါ IMF သည် အစိုးရပြည်သူ၏အလိုအတိုင်း ငွေကိုသုံးဆောင်သွားမည် ဟူ၍သာဆိုခဲ့သည်။ ဗဟိုဘဏ်၏အကြီးအကဲဖြစ်သူသည် စစ်တပ်မှဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ လော်ဘီသတင်းထောက်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အလွန် နီးစပ်လျက်ရှိနေသောကြောင့် အာဏာသိမ်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာတပ်မတော်အနေဖြင့် အမေရိကန်ကဲ့သို့သော အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အနောက်တိုင်းမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအား လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်နိုင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အစည်းအဝေးများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အား အရေးယူမည့်ဥပဒေမူကြမ်းတို့ကို တရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့သာလျှင် ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ထိုနှစ်နိုင်ငံတို့သည် မြန်မာ့စစ်တပ်အား လက်နက်ထောက်ပံ့ရာ၌ အဓိကနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၉ တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော‌ငွေ‌ကြေးမှာ ဒေါ်လာ ၁၉ ဘီလီယံရှိခဲ့၍ ဥရောပမှ မြှုပ်နှံထားသော‌ငွေ‌ကြေးမှာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ မီလီယံသာ ရှိခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအား စစ်လက်နက်ရောင်းရသဖြင့် ပိုမိုရောင်းရရန် စစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကို ထောက်ခံသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံသည်လည်း မြန်မာ့စစ်တပ်အား စစ်လက်နက်နှင့် စစ်ဖက်သုံးကိရိယာများကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိခဲ့သည်။ အစ္စရေးတရားရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံအား စစ်လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုပိတ်ဆို့ရန် အမိန်ထုတ်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာစစ်တပ်သည် အခြားအစ္စရေးကုမ္ပဏီများမှ လက်နက်များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တပ်မတော်အရာရှိများသည် အစ္စရေးလက်နက်ပြပွဲများကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မှ အာဏာသိမ်းခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီသည် မညီသည်ကို ဥပဒေပညာရှင်များက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ NLD အစိုးရသည် တပ်မတော်၏ ဥပဒေအသုံးချမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့၍ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကသာလျှင် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ ကြေညာနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့သို့ကြေညာပြီးမှသာလျှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၈ အရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အာဏာမသိမ်းပိုက်ခင် အချိန်တွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များမှာ ပြည်သူများကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တပ်မတော်သည် ထိုကောင်စီကို ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကသာ ဦးဆောင်သည်ဟုဆိုခဲ့ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် ၄၁၈ တို့ကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဥပဒေများကို အသုံးချခဲ့သော်လည်း အစိုးရ၏ တရားဝင် အတည်ပြုမှုမပါရှိခဲ့သောကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်တရားဝင်သည် မဝင်သည်မှာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။
နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် International Commission of Jurists အဖွဲ့က စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိကာ စွပ်စွဲထားသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မဲစာရင်းပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းသည် အရေးပေါ်အခြေနေကြေညာရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအရ လုံလောက်မျှတသော အနေအထားမဟုတ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပေသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါဖော်ပြချက်တွင် ဥပဒေပညာရှင်များအဖွဲ့က စစ်တပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ သုံးခုစလုံးကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟုလည်း ကြေညာခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံဆန္ဒပြမှုများ
ရန်ကုန်မြို့၊ လှည်းတန်း၌ ဆန္ဒပြနေကြပုံ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် အခြားအလုပ်သမားများသည် "ပြည်သူများမလိုက်နာခြင်း"ကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်၌လည်း "Civil Disobedience Movement" အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ follower ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်မျှပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ၌လုပ်ကိုင်ကြသော အလုပ်သမားများသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အနုနည်းဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ ၁၁၀ ကျော်မှ အလုပ်သမားများပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာဆရာမပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်‌ဟောင်းများသည်လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ နေပြည်တော်၏ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်သမားများသည်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ရှစ်လေးလုံးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ မင်းကိုနိုင်သည်လည်း ထိုသို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသရာတွင် လက်သုံးချောင်းထောင်ထားခြင်းကို သင်္ကေတပြုခဲ့ကြသည်။ အချို့သော အင်တာနက် အသုံးပြုသူများသည် အာရှ၏ အွန်လိုင်း ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော နို့လက်ဖက်ရည်မဟာမိတ် (Milk Tea Alliance) ဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းသည် Civil Disobedience တွင်စတင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ "ကမ္ဘာမကြေဘူး" နှင့် "အရေးကြီးပြီ" ဟူသောသီချင်းတို့ကိုသီဆိုခြင်းဖြင့်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
မန္တလေး ဘူတာကြီးအနီး ၇၈ လမ်း၌ ဆိုင်ကယ်စီး၍ ဆန္ဒပြနေကြစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ ကဲ့သို့‌သော မြို့ကြီးများ၌ ‌ညနေ ၈ နာရီ အချိန်တိုင်းတွင် အိမ်တွင်း၌ "cacerolazo" ခေါ် အိုးများနှင့်သံပုံးများကို ရိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်၏ ထုတ်ကုန်များကို အားမပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအားမပေးသောထုတ်ကုန်များတွင် Mytel၊ မြန်မာဘီယာ၊ မန္တလေးဘီယာ၊ ဒဂုံဘီယာ၊ သတ္တမမြောက်အာရုံ စသည်တို့ပါဝင်ကြသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း Mytel ၌ အလုပ်သမား ၇၁ ဦးသည် လုပ်ငန်းမှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၌ ဆရာမများ ဆန္ဒပြနေကြစဉ်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၈ နာရီ၌ အချို့သောရန်ကုန်သားများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားစေလွှတ်ရန် ၁၅ မိနစ်မျှထွက်ရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မန္တလေးစည်ပင်မှ အဖွဲ့ဝင် ၆ ယောက်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်တွင် လုပ်ငန်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ရှေ့၌ လူအယောက် ၃၀ ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လူအယောက်နှစ်သောင်းခန့် လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့၍ အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွတ်‌ပေးရန် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် မန္တလေးနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့တို့၌လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် အကြမ်းဖက်အားကိုသုံး၍ ဆန္ဒပြသူများကို လူစုခွဲစေခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူ ၆ ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့်အပြင် အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိသော မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်လည်း ဦးခေါင်း၌ကျည်ဆန်မှန်ခဲ့ကာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူအယောက် ၁၀၀ ခန့်မှာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖြစ်သည်ဟု ဗီနိုင်းများကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြစဉ်။
လူငယ်များသည် ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ စကတ်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံများ စသည်တို့ကိုဝတ်ဆင်ပြီး တစ်မူထူးခြားစွာဆန္ဒပြခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းသာမက နိုင်ငံတကာမီဒီယာများကို တွေ့မြင်စေရန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ (ပြည်ထောင်စုနေ့) တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ရဲများသည် သေနတ်များပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် ဆန္ဒပြသူများကိုလူစုခွဲစေခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ဆန္ဒပြသူများအား သေနတ်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် လူစုခွဲစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သတင်းထောက် ၅ ဦးလည်း ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ မန္တလေးမြို့တွင်လည်း စစ်သားများသည်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ရာဘာကျည်ဆန်များအပြင် လောက်လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် ဖေ့စဘွတ်လူမှုကွန်ရက်ကို "တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်လို‌သောကြောင့်" ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့အထိပိတ်ပင်ရန် အင်တာနက်ပေးစွမ်းသူများကို အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ MPT သည်လည်း Facebook messenger၊ အင်စတာဂရမ် နှင့် WhatsApp တို့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ တယ်လီနောကမူ ဖေ့စဘွတ်ကိုသာ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေ့စဘွတ်ကို ပြည်သူများမလိုက်နာခြင်းလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဖေ့စဘွတ်အပိတ်ပင်ခံရသောအခါ အသုံးပြုသူများသည် တွစ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရာ #RespectOurVotes၊ #HearTheVoiceofMyanmar၊ #SaveMyanmar. စသည်တို့ကိုရေးခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သည် တွစ်တာကိုပါပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်တွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ အင်တာနက် ပြန်ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သောကြောင့် အင်တာနက် လိုင်းများကိုနေ့လယ်တွင်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် လူမှုကွန်ရက်များကိုမူ ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်မှစ၍ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို မနက် ၁ နာရီမှ ၉ နာရီအထိပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နေ့စွဲအလိုက်စေခိုင်းမှုများကို တယ်လီနော မြန်မာ မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး အိမ်ရာတိုးတက်ရေး စီးပွားရေးဖြစ်သော Amata Corporation သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံကုန်ကျသော စက်မှုတိုးတက်ရေးဇုန်တည်ဆောက်ခြင်းကို အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကားထုတ်လုပ်မှု အကြီးဆုံးဖြစ်သော စူဇူကီးသည်လည်း ပြည်တွင်းကားထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ရန်ကုန် စတော့အိတ်စချိန်းသည်လည်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးသည်လည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်သော Total SE သည် မိမိ၏ပံ့ပိုးမှုအပေါ် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ကီရင် ကုမ္ပဏီ (Kirin Company) သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဈေးကွက်ရှယ်ရာ ၈၀% (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံ) ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် Razer ကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူ သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်မှ ရှယ်ယာအများစုပိုင်ဖြစ်သော Virginia Tobacco ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရပ်ဆိုင်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပက်သက်၍ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်လုပ်ဆောင်မည် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင် မြန်မာနိုင်ငံအားထောက်ပံ့မည့်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ပေးအပ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ဆန္ဒပြမှုများစပြီးမကြာမီတွင် မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပုန်ကန်မှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ရဲအရာရှိ ၁၁ ဦးသည် ဆန္ဒပြသူများအား မသတ်ဖြတ်လိုသောကြောင့် မြန်မာ–အိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ မိသားစုများနှင့် ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ စစ်ကောင်စီသည် မီဇိုရမ်ဒေသရှိ ရဲအရာရှိများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အာသံရိုင်ဖယ်တက်ဖွဲ့ကိုမူ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်၏ လုံခြုံရေးကို ကျပ်မတ်စေရန် အိန္ဒိယအစိုးရမှ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ရဲသားများ ၆၀၀ ကျော်မျှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်၍ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ မတ်လ ၁၀ ရက်မှစ၍ နယ်စပ်၌ဖြတ်သန်းမှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၌လည်း တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုများရှိခဲ့သည်။ တပ်မ ၇၇ မှ အရာရှိ ထွန်းမြတ်အောင်နှင့် တပ်မ ၉၉ မှ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦးတို့အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်သားများသည် မိမိတို့ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတပ်အရာရှိတို့သည် တပ်မတော်အတွင်း၌ မတည်ငြိမ်မှုများ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၌ လူယောက် ၃၀၀၀ ခန့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြကြစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလူမျိုးအယောက် ၂၀၀ ခန့်နှင့် အချို့သော ထိုင်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် တက်ကြွသူများသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ဦး ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ကုလသမဂ္ဂ တက္ကသိုလ်၌ အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ‌ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ မြန်မာ-အမေရိကန်လူများ အယောက် ၁၅၀ ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
စင်္ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် သတိပေးခဲ့သည်။ ထိုရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ နိုင်ငံခြားသားဆန္ဒပြသူ ၃ ဦးကို ဆန္ဒပြခွင့်မယူထားသောကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ စသောနိုင်ငံများသည် အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းကို စိုးရိမ်ပါ‌ကြောင်းနှင့် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်တို့သည် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန် နယူးဇီလန်၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ တူရကီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများ သည် ဖမ်းဆီးခံရသူတို့ကို လွှတ်ပေးသင့်ကြောင်း ရာဇသံအမိန့်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင်သည်လည်း အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တပ်မတော်အား လိုအပ်လာလျှင် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်ဆင်တာ အာဒန် (Jacinta Ardern) သည် အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ရပ်တန့် ထားသည့်အပြင် ရာထူးကြီးဗိုလ်ချုပ်များကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် ထိုအာဏာသိမ်းခြင်းကိစ္စကို ပြည်တွင်း ပြဿနာ အဖြစ်နှင့်သာ ယူဆ၍ ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ အန်တိုနီရို ဂူတာရက်စ်သည် ထိုသို့အာဏာသိမ်းခြင်းသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို ထိခိုက်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အာဆီယံအဖွဲ့သည်လည်း နိုင်ငံများအစည်းဝေးခေါ်ယူခဲ့၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂသည်လည်း ထိုသို့ အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ယူကေမှဦးစီး၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ဖော်ယူရေးနှင့် တပ်မတော်အား ပစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အစည်း‌အဝေးခေါ်ယူခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံလုံးမှ သဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့ပေ။ တရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် အစိုးရနှင့်ပြန်လည်ဆွေးနွှေးလိုသည်ဟုဆိုကာ သဘောတူပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြသော တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် ဗီတိုအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့၍ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပိတ်ပင်ခဲ့သည့်အပြင် တရုတ်သည် "အစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း" သာဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမဟုတ်ကြသော အိန္ဒိယနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် ထိုသို့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ယူရေးကို ပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ မတ် လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီသည် ဖမ်းဆီးခံရသူများအား ပြန်လွတ်ပေးရန်၊ အာဆီယံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအားကူညီပေးရန်၊ စစ်တပ်နှင့်ပြည်သူနှစ်ဖက်လုံးမှ ဆွေးနွှေးတိုင်ပင်ကြရန်သာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ မတ် ၂၇ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားကို နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ ဧပြီ ၂၄ တွင် အာဆီယံအသင်းမှ မင်းအောင်လှိုင်အား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်သောနိုင်ငံရေးသမားများမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့သည် အာဆီယံအား ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား ထိုအစည်းအဝေးသို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် မင်းအောင်လှိုင်အား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အာဆီယံသည် အချက်ငါးချက်ပါ သဘောတူညီမှု (five-point consensus) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့၍ မင်းအောင်လှိုင်အား ပြည်သူတို့အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို လျှော့ချပေးရန်သာတောင်းဆိုခဲ့၍ အခြားထိရောက်‌သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပေးစွမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control" (in en-GB)၊ ဘီဘီစီ၊ 2021-02-01။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 January 2021။
↑ Protests, Anger Spreading Rapidly in the Wake of Myanmar Coup (8 February 2021)။ 8 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Beech၊ Hannah။ "Myanmar’s Leader, Daw Aung San Suu Kyi, Is Detained Amid Coup"၊ The New York Times၊ 31 January 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 January 2021။
↑ "Myanmar military seizes power in coup after detaining Aung San Suu Kyi"၊ The Washington Post။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ Foundation၊ Thomson Reuters။ Myanmar military seizes power, detains elected leader Aung San Suu Kyi။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar gov't declares 1-year state of emergency: President's Office။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Leader Aung San Suu Kyi, Others Detained by Military။ VOA (Voice of America) (February 1, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar State Counsellor and President charged, detained for2more weeks" (in en-UK)၊ Myanmar Times၊ 2021-02-03။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2021။
↑ Adange၊ Christy။ "Myanmar Coup: Aung San Suu Kyi charged with military for “transceiver and handshake”" (in en-NZ)၊ Wall Street Journal၊ 2021-02-04။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 February 2021။
↑ Quint၊ The။ "Days After Coup, Aung San Suu Kyi Charged for Breaching Import Law" (in en-IN)၊ The Quint၊ 2021-02-04။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2021။
↑ Solomon၊ Feliz။ "After Myanmar Coup, Aung San Suu Kyi Accused of Illegally Importing Walkie Talkies" (in en-US)၊ Eminetra၊ 2021-02-03။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ "Myanmar coup: Aung San Suu Kyi faces new charge amid protests"၊ BBC News၊ February 16, 2021။ February 17, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 February 2021။
↑ Daily Briefing in Relation to the Military Coup။ 23 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ On This Day, The Day Myanmar’s Elected Prime Minister Handed Over Power (in en-US) (2020-09-26)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Butwell, Richard (1960). "The 1960 Election in Burma". Pacific Affairs 33 (2): 144–157. Pacific Affairs, University of British Columbia.
↑ Taylor၊ Robert (2015-05-25)။ General Ne Win။ ISEAS Publishing။ ISBN 978-981-4620-14-7။3February 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How A Failed Uprising Set The Stage For Myanmar's Future။ 19 September 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Burma: 20 Years After 1990 Elections, Democracy Still Denied။ 26 September 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p611 ISBN 0-19-924958-X
↑ Myanmar’s 1990 Election: Born ofaDemocratic Uprising, Ignored by the Military။ ဧရာဝတီသတင်းဌာန။ 31 January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How Myanmar's Fragile Push for Democracy Collapsed inaMilitary Coup။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "As Myanmar opens to the world, the mess inside becomes more apparent"၊ Bloomberg.com။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 October 2020။
↑ အာဏာမသိမ်းဘူးလို့ ‘မပြောနိုင်’ ဟု တပ်မတော် ခြိမ်းခြောက်။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Australia joins list of countries warning Myanmar military against staging coup amid fraud claims (in English) (Jan 30, 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီလို့ ယူဆ - NLD ပြောခွင့်ရသူ Archived5February 2021 at the Wayback Machine.။ VOA Burmese။
↑ Foundation၊ Thomson Reuters။ Aung San Suu Kyi and other leaders arrested, party spokesman says။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Internet disrupted in Myanmar amid apparent military uprising (in en-US) (31 January 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် အပါအဝင် မြို့ကြီးအများစု အဆက်သွယ်ပြတ်နေ Archived 1 February 2021 at the Wayback Machine.။ ဘီဘီစီမြန်မာ။
↑ Myanmar Military Blocks Internet During Coup (in en) (2021-02-02)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hundreds of Myanmar MPs under house arrest (in en)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Myanmar Military Give MPs 24 Hours to Leave Naypyitaw (in en-US) (2021-02-03)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ​နေပြည်​တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာရှိကိုယ်စားလှယ်များအား ၂၄နာရီအတွင်းထွက်ခွာရန်ညွှန်ကြား (in my) (၄ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁)။ 19 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 March 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NLD lawmakers in Nay Pyi Taw defy military, take oath of office (in en-US) (2021-02-04)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Statement on Recent Detainees in Relation to the Military Coup (2021-02-04)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Three Saffron Revolution monks among those detained in February 1 raids (in en)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Coup plunges Myanmar further intoaclimate of religious nationalism - UCA News (in en)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar's Aung San Suu Kyi 'detained by military', NLD party says"၊ ဘီဘီစီ၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 January 2021။
↑ Myanmar military says it is taking control of the country (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ တစ်နှစ်ကြေညာ၊ တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း လက်ရှိဒုသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ယာယီသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူ။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar military stages coup, declares state of emergency forayear (in en) (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar to clarify voter fraud, hold new round of elections (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Telecommunications disruptions shut down Myanmar banks (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး အမိန့်အမှတ်(၉/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် (in my)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar military announces new State Administrative Council (2 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၅.၀ ၄၅.၁ ၄၅.၂ Aung San Suu Kyi, Win Myint to face charges as NLD calls for ‘unconditional’ release (in en-US) (2021-02-03)။ 17 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ Myanmar police file charges against Aung San Suu Kyi after coup (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar police file charges against ousted leader Aung San Suu Kyi under import-export law (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar police charge ousted leader Aung San Suu Kyi, days after military coup (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar DetainedaTeam of Journalists for FlyingaDrone။ 12 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar detains Australian adviser to Aung San Suu Kyi; first known arrest of foreign national since coup (in English) (Feb 6, 2021)။6February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Facebook။ 17 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Military Govt Bans Gatherings of Five or More in Yangon, Other Areas (in en-US) (2021-02-09)။ 10 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar anti-coup protests resume despite bloodshed (10 February 2021)။ 17 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Civil society, businesses condemn junta’s draft Cyber Security Law (in en-US) (2021-02-11)။ 12 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China Denies Helping Myanmar Military Regime Build Internet Firewall (in en-US) (2021-02-11)။ 16 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 11 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Military castsawide net withaseries of late-night raids (in en)။ 14 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Military Bans Use of ‘Regime’, ‘Junta’ by Media (in en-US) (2021-02-13)။ 14 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဂျင်မီ၊ အဆိုတော်လင်းလင်း ၊ အင်းစိန်အောင်စိုး၊ ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်း၊ ပန်ဆယ်လို နှင့် မောင်မောင်အေး တို့အား ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် တရားစွဲထားပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားကြောင်း တပ်မတော် ကြေညာ (in my)။ 14 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar coup: Armoured vehicles deployed to cities amid protests as junta extends Aung San Suu Kyi detention။ 15 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "New charge filed on Suu Kyi as Myanmar crackdown intensifies"၊ Associated Press၊ February 17, 2020။ February 17, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 February 2021။
↑ Six Myanmar celebrities face arrest upon civil disobedience movement။ 18 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Ambassador to UN denounces military coup, as envoy warns democratic processes have been 'pushed aside'။ 1 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar ambassador to the United Nations has been fired: state TV။ 27 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Japanese journalist briefly detained in Myanmar while covering protests။ 26 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ သတင်းဌာန ၅ ခုကို ထုတ်‌ဝေခွင့်ပိတ် – ဘီဘီစီ မြန်မာ | အထူးသတင်း | နောက်ဆုံးရ သတင်း | နောက်ဆုံးရခေါင်းစဉ် သတင်း |မြန်မာသတင်း (in my-MM)။7March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar recalls ambassador in UK after he called for release of detained leader Aung San Suu Kyi။9March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စစ်တပ်အရာရှိကြီး နှစ်ဦးရုံးထဲ ဝင်လာပြီး နုတ်ထွက်ခိုင်း - သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်။ 12 October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tatmadaw seizes power under state of emergency, to rule forayear (in en-US) (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar election commission rejects military’s fraud claims (29 January 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Min Aung Hlaing: the heir to Myanmar’s military junta (in en) (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar military appoints ministers after ousting Suu Kyi in coup (in en-GB)။2February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၆.၀ ၇၆.၁ Could Min Aung Hlaing’s retirement break the political deadlock? (in en-US) (12 January 2021)။ 30 January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Editor၊ Richard Lloyd Parry, Asia။ "Senior General Min Aung Hlaing’s secret motive for Burma coup" (in en)။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ ၇၈.၀ ၇၈.၁ General Min Aung Hlaing is the ambitious army chief and international pariah who seized power in Myanmar (in en)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၉.၀ ၇၉.၁ Who profits fromacoup? The power and greed of Senior General Min Aung Hlaing။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pierson၊ David (2021-02-02)။ Myanmar's military upended its comfortable status quo by stagingacoup. Why? (in en-US)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၁.၀ ၈၁.၁ Lawder၊ David။ "Days before coup, IMF sent Myanmar $350 million in emergency aid; no precedent for refund" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-03။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5February 2021။
↑ ၈၂.၀ ၈၂.၁ Lawder၊ David။ "IMF says members to guide decision on whether to recognize Myanmar's military leaders" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-05။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2021။
↑ Transcript of IMF Press Briefing (in en)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simon Lewis။ Lobbyist says Myanmar junta wants to improve relations with the West, spurn China။7March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yen Nee Lee။ China's 'laissez-faire' approach toward Myanmar's coup puts its own interests at risk, says analyst။ 13 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simon Tisdall။ A child screams in Myanmar … and China pretends not to hear။ 12 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China holds the key to stabilising Myanmar။ 13 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၈.၀ ၈၈.၁ Kate Abnett။ China, Russia undermine international Myanmar response, EU's top diplomat says။ 13 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russia strides into diplomatic void after Myanmar coup။ 13 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GDC (2021-07-14)။ Myanmar Army used Israeli drones, armored vehicles and spyware during the military coup (in en-US)။ 14 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beech၊ Hannah။ "Myanmar’s Military Deploys Digital Arsenal of Repression in Crackdown" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-03-01။ 14 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 July 2021။
↑ Israel's top court just ruled about arms sales to Myanmar. But we're not allowed to tell you the verdict (in en)။ 8 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Israel refuses to halt arms supply to Myanmar army (2017-09-04)။7September 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Despite int'l sanctions, Myanmar officials attend Tel Aviv weapons expo (in en-US) (2019-06-04)။ 14 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၅.၀ ၉၅.၁ Crouch၊ Melissa (2021-02-02)။ The power and ambition behind Myanmar’s coup (in en)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘The constitution is invalid now’: NLD patron fires back at military (in en-US) (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၇.၀ ၉၇.၁ ၉၇.၂ After coup, medical workers spearhead civil disobedience campaign (in en-US) (2021-02-02)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Statement from Myanmar military on state of emergency" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-01။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ ၉၉.၀ ၉၉.၁ Emergency Powers in Myanmar (in en) (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar latest: NLD calls for Suu Kyi's release (in en-GB)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2021-02-01။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 January 2021။
↑ Myanmar: Military Coup d'état violates principles of rule of law, international law and Myanmar’s Constitution (in en-US) (2021-02-08)။9February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nay Pyi Taw, Mandalay healthcare staff to join 'Civil Disobedience Campaign' (2 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Medics Prepare Civil Disobedience Against Military Rule (in en-US) (2 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၅.၀ ၁၀၅.၁ ၁၀၅.၂ ၁၀၅.၃ Teachers, students join anti-coup campaign as hospital staff stop work (in en-US) (2021-02-03)။ 19 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar doctors stop work to protest coup as UN considers response (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၇.၀ ၁၀၇.၁ Myanmar’s Medics Launch Civil Disobedience Campaign Against Coup (in en-US) (2021-02-03)။ 23 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စစ်အစိုးရကို နေပြည်တော်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ (in my)။ 18 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Veteran activist calls for civil disobedience in wake of coup (in en)။ 18 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar blocks Facebook as resistance grows to military coup (in English) (Feb 5, 2021)။ 8 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ #MilkTeaAlliance hasanew target brewing: Myanmar’s military (in en) (2021-02-04)။ 23 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Civilian Disobedience Campaign' takes flight in Myanmar (2021-02-05)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Songwriter Who Provided ‘Theme Song’ to 8888 Uprising Finally Honored (in en-US) (2018-08-09)။ 22 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar coup: army blocks Facebook access as civil disobedience grows (in en) (2021-02-04)။
↑ Anti-coup protests ring out in Myanmar's main city (in English) (Feb 2, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar coup latest: UN Security Council stops short of issuing statement (in en-GB)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar calls for boycott of Tatmadaw linked products and services (2021-02-03)။ 21 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Military Chief’s Family Members Spend Big on Blockbuster Movies, Beauty Pageants (in en)။ 15 December 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အနုနည်းအာဏာဖီဆန်မှု တချို့ရှိလာခြင်း (in my)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mandalay vice mayor, MCDC members resign (2021-02-03)။ 8 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mandalay citizens protest against Tatmadaw rule (2021-02-04)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Four arrested in Mandalay after street protest against military coup (in en)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ search။6February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thousands Take to Streets of Myanmar to Protest Military Takeover။6February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Six Protesters Injured After Myanmar Police Fire on Protest (in en-US) (2021-02-09)။ 10 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Protest crackdown begins in Myanmar, over 100 nabbed in Mandalay (2021-02-09)။
↑ Arrested protesters released in Mandalay (2021-02-10)။ 17 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar coup: 'My ex is bad but military is worse'" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2021-02-08။ 12 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 12 February 2021။
↑ Princesses and bodybuilders: The new generation of Myanmar protesters (in en) (2021-02-11)။ 16 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Limited၊ Bangkok Post Public Company။ "Protesters defy Myanmar junta, shots fired in Mawlamyine"၊ Bangkok Post။
↑ "Myanmar coup: Troops on the streets as internet cut off" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2021-02-14။ 17 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 February 2021။
↑ Myanmar: troops and police forcefully disperse marchers in Mandalay (in en) (2021-02-15)။ 15 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၃.၀ ၁၃၃.၁ ၁၃၃.၂ Staff၊ Reuters။ "Myanmar internet providers block Facebook services after government order" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-03။
↑ Myanmar: tanks roll into cities as internet shut down (in en) (2021-02-14)။ 15 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beech၊ Hannah။ "Military Imposes Full Grip on Myanmar in Overnight Crackdown" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-02-14။ 15 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 February 2021။
↑ Directives from authorities in Myanmar - February 2021 (in en)။ 15 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၃.၀ ၁၄၃.၁ ၁၄၃.၂ Thailand's Amata halts $1bn Myanmar property project after coup (in en-GB)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thai developer invests $1bn to put Myanmar industry on global map (in en-GB)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar's real estate sector crashes (2021-02-05)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff၊ Reuters။ "Total assessing impact of Myanmar coup on its projects" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-04။7February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2021။
↑ Kirin, parent company of Australian beer company Lion, cuts ties with Myanmar military after coup (in English) (Feb 5, 2021)။7February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kirin beer company cuts brewery ties with Myanmar military over coup (in English) (Feb 5, 2021)။ 10 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၉.၀ ၁၄၉.၁ Japan's Kirin ends Myanmar beer tie-up with army-owned partner after coup။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ hermesauto (2021-02-09)။ Razer co-founder and director Lim Kaling pulls out of Myanmar joint venture (in en)။ 20 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar junta chief Min Aung Hlaing says this coup is 'different' (in en-GB)။9February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Times၊ The New York။ "Video: Biden Imposes New Sanctions on Leaders of Myanmar Military Coup" (in en-US)၊ The New York Times။ 12 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 February 2021။
↑ Archived copy။ 10 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar coup: India asked to return police officers who crossed border"၊ BBC News၊7March 2021။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 March 2021။
↑ Myanmar protest: '19 Myanmar cops take shelter in Mizoram' | World News – Times of India။ 17 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ghoshal၊ Devjyot (10 March 2021)။ 'Shoot till they are dead': Some Myanmar police flee to India after refusing orders။ 11 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar coup: 'We were told to shoot protesters', say police who fled"၊ BBC News၊ 10 March 2021။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 March 2021။
↑ India၊ Press Trust of။ "Mizoram is waiting for govt's direction on Myanmar refugees: state minister"၊ 8 March 2021။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 March 2021။
↑ IANS။ India orders Assam Rifles to prevent influx from Myanmar (in en-US)။ 8 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ More Than 600 Police Join Myanmar's Anti-Regime Protest Movement (in en-US) (2021-03-05)။7September 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ User၊ Super (7 March 2021)။ India in diplomatic spot as Myanmar urges return of cops who fled။7March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၂.၀ ၁၆၂.၁ အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက တပ်ပျက်နေကြောင်း ပုန်ကန်သူတပ်အရာရှိပြောကြား (in my)။ 25 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၃.၀ ၁၆၃.၁ Beech၊ Hannah။ "Inside Myanmar's Army: 'They See Protesters as Criminals'" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-03-28။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 April 2021။
↑ ၁၆၄.၀ ၁၆၄.၁ Interview: 'Military Leaders Are Afraid of Letting Their Power Go' (in en)။ 25 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 3,000 Myanmar protesters rally in Tokyo for Suu Kyi’s release : The Asahi Shimbun။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ด่วน! ชาว 'เมียนมา' ชู3นิ้วบุกประท้วงหน้าสถานทูต ต้านรัฐประหารในประเทศ (in th) (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar’s military stages coup d’etat: Live news။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar workers in Japan protest against Tatmadaw’s actions (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဝါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာစစ်သံရုံးရှေ့မှာ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေဆန္ဒပြ (in my)။4February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Police issues warning against plans to protest in Singapore over current situation in Myanmar (in English) (Feb 5, 2021)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Police warn against plans to protest in Singapore over situation in Myanmar (in English) (Feb 5, 2021)။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 14 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Feb 1၊ TIMESOFINDIA COM /။ Deeply concerned by developments in Myanmar, says India (in en)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bangladesh wants democratic process upheld in Myanmar"၊ Dhaka Tribune၊ 2A Media Limited.၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ Indonesia Urges All Parties in Myanmar to Exercise Self-Restraint။ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China 'notes' Myanmar coup, hopes for stability (1 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Press Release: Latest Situation in Myanmar။ Ministry of Foreign Affairs (Malaysia)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pakistan hopes from all sides in Myanmar to be restraint, work for peace: Zahid Hafeez (in en)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Philippines following Myanmar situation with deep concern"၊ Philstar.com၊3February 2021။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ S. Korea expresses concerns over Myanmar coup (February 1, 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 1, 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MFA Spokesperson's Comments in Response to Media Queries on the Detention of Myanmar Leaders and Officials (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Goldman၊ Russell။ "Myanmar’s Coup, Explained" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-02-01။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2February 2021။
↑ Australia joins global condemnation of Myanmar generals (in English) (Feb 1, 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statement on Myanmar။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Justin Trudeau on Myanmar: “The democratic process must be respected” (2 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ France calls on Myanmar military to release Suu Kyi, respect election results။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Japan urges Myanmar military to free Suu Kyi, restore democracy"၊ Manila Bulletin၊ 1 February 2021။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ Mahuta၊ Nanaia (1 February 2021)။ New Zealand statement on Myanmar။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sánchez condena el golpe de Estado en Myanmar y pide vueltaala democracia (in es) (2021-02-01)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Foreign Minister condemns military coup in Myanmar။ Sveriges Radio။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Turkey condemns, 'deeply concerned' by coup in Myanmar"၊ Anadolu Agency၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ UK condemns military coup in Myanmar (in en)။ Anadolu Agency (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statement by White House Spokesperson Jen Psaki on Burma (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "‘Serious blow to democracy’: World condemns Myanmar military coup" (in en)၊ Al Jazeera၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2021။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee, Matthew (February 1, 2021)။ Biden threatens sanctions on Myanmar after military coup။2February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statement by President Joseph R. Biden, Jr. on the Situation in Burma (February 1, 2021)။2February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Zealand suspends ties with Myanmar; to ban visits from military leaders။9February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "West condemns Myanmar coup but Thailand, Cambodia shrug"၊ Bangkok Post၊ Bangkok Post Public Company Ltd.၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2021။
↑ "Myanmar's army seizes power, detains Aung San Suu Kyi" (in en-CA)၊ National Post၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2021။
↑ "Myanmar military coup: Nordic and Asian reactions"၊ ScandAsia၊2February 2021။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary General - on Myanmar။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ASEAN calls for "return to normalcy" in Myanmar after coup | Reuters။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Negara-negara ASEAN Bahas Kudeta Militer di Myanmar။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Adkins၊ William။ "EU leaders condemn military coup in Myanmar"၊ Politico၊ 1 February 2021။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ "UNSC takes no action on coup in Myanmar"၊ Gulf Today၊3February 2021။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3February 2021။
↑ UN Security Council searches for unity on Myanmar (in English) (Feb 2, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Security Council fails to agree statement condemning Myanmar coup (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The UN Security Council has failed to agree onajoint statement condemning Monday’s coup in Myanmar, afteratwo hour long emergency meeting failed to secure the support of China,akey Myanmar ally andaveto-holding permanent member of the council.”
↑ UN Security Council takes no action on Myanmar coup (in English) (February 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar coup: China blocks UN condemnation as protest grows (in English) (Feb 3, 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Aung San Suu Kyi could face two years in jail over ‘illegal’ walkie-talkies"၊ The Guardian၊3February 2021။5February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 February 2021။
↑ "UN calls for reversal of Myanmar coup and condemns violence" Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine. March 10, 2021, Associated Press (also at: U.S. News and World Report Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine. and CTV News Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine., retrieved April 9, 2021
↑ "U.N. Security Council agrees to condemn Myanmar violence, urge military restraint," Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine. March 10, 2021, Reuters News Service, (also in the Straits Times Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine.) retrieved April 9, 2021
↑ "U.N. Security Council Strongly Condemns Myanmar Military's Violence," Archived 16 June 2021 at the Wayback Machine. March 11, 2021, Agence France-Presse in The Hindu
↑ "Issuing Presidential Statement, Security Council Expresses Deep Concern about Developments in Myanmar," Archived 11 April 2021 at the Wayback Machine. Press Release SC/14462, March 10, 2021, United Nations Security Council, retrieved April 9, 2021
↑ "On Bloodiest Day for Myanmar Civilians, India Attends Military Parade by Coup Leaders"၊ The Wire၊ 28 March 2021။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 March 2021။
↑ Myanmar's National Unity Government must be invited to this week's ASEAN Special Summit, MPs say (in en-US) (2021-04-20)။ 28 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Southeast Asian leaders to press Myanmar junta to end violence, allow aid - sources"၊ Reuters၊ April 24, 2021။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 April 2021။
↑ "ASEAN leaders meet Myanmar coup leader Min Aung Hlaing in Indonesia, amid killings" (in en-IN)၊ The Hindu၊ 24 April 2021။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 April 2021။
↑ Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting. (in en-US) (2021-04-24)။ 24 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၂၁_မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်း&oldid=741428" မှ ရယူရန်
၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။